Isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo oo dalbatay in baaritaan caalami ah lugu sameeyo weerarkii lugu dilay qaxootiga Soomaalida | RBC Radio
Isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo oo dalbatay in baaritaan caalami ah lugu sameeyo weerarkii lugu dilay qaxootiga Soomaalida	Posted on March 20, 2017
Muqdisho (RBC Radio) Xulafada uu hoggaamiyo Sacuudiga ee weerarrada ka geysta dalka Yemen ayaa qoraal rasmi ah oo ka soo baxay waxaa ay Qaramada Midoobay oga dalbadeen in baaritaan caalami ah lugu sameyso weerarka lugu dilay qaxooti Soomaaliya ah oo dooni ay la socdeen lugu weerarray xeebaha Yemen.
Ilaa 45 ruux ayaa weerarka ku dhintay,waxaana la sheegay inay fulisay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah,markiiba waxaa weerarka lugu eedeyay isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga.
Isbaheysiga wuxuu beeniyay inuu wax lug ah ku leeyahay weerarka,iyagoo hadda dalbaday Qaramada Midoobay baarayaal caalami ah inay u dirto goobta uu weerarka ka dhacay.
“Waxaan ka warqabnaa in weerarkaasi ay fulisay diyaarad helicopter ah, islamarkaana eedeyn loo soo jeediyay Isbaheysiga marka waxaana Qaramada Midoobay ka codsaneynaa in ay baarto”. ayaa lagu yiri war kasoo baxay Isbaheysiga.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda ka sugeysa isbaheysiga Sacuudiga iyo dowladda Yemen inay soo cadeeyaan cida ka dambeysay weerarka oo ay ku dhinteen qaxooti Soomaali ah oo la sheegay dalka Suudaan inay ku sii jeedeen.